Read More / Sii akhri Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Canada oo Qaabilay Xubno Ka Tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed 01 Sep 2011 [Sawirada Jamal, Ugas Iyo John] Arboco, Agoosto 31, 2011 (HOL) - Labo xubnood oo ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Ottawa ayaa shalay kulan la yeeshay wasiirka arimaha dibeda ee dalka Canada Mudane John Baird. Labadaas xubnood oo kala ah: Cumar Ugaas iyo Jamaal Xasan, ayaa wasiirka waxay kula kulmeen xafiiiskiisa wasaarada arimaha debeda ee magaalada Ottawa. www.tawakalexpress.net Ugu horeyn, waxay xubnahaasi uga mahadaceliyeen shacabka iyo dawlada Canada sidii hagar la'aanta ahayd ee ay uga qayb qaateen gar-gaarkii loo fidinayey shacabka Soomaaliyeed ee abaartu samaaeysey. www.etawakal.comWaxaa kale oo ay xubnahaasi wasiirka kala hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen: Abaaraha ka taagan Soomaaliya, baahida loo qabo in ay dawlada Canada ergay u magacawdo wadanka Soomaaliya maadaama wadanka Soomaaliya uu hada marayo marxalad aad u adag oo u baahan kaalmo bini aadan nimo iyo in ay qayb ka qaataan dib u heshiisiinta Soomaaliya. Waxaa kale oo qodabadii halkaas lagu soo qaaday ka mid ahaa la dagaalanka burcad badeedka iyo sidii loogu sameyn lahaa shaqo abuuris dadka dhalinyarada ah ee ku nool deegaanada burcad badeedku saameynta ku yeesheen, iyo weliba sidii sare loogu qaadi lahaa tacliinta sare ee jaamacadaha Soomaaliya. Waxaa kale oo xubnihii wasiirka la shirey kala hadleen arinta Bashir Makhtal oo ah mawaadin Canadian ah oo si sharci daro ah mudo dheer ugu xiran dalka Ethiopia.Wasiirka ayaa aad usoo dhoweyey kulankaas oo isla markaana balan qaaday in uu intii karaankiisa ah uu arimahaas wax ka qaban doono. Kulankaas ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska wasiirka.Wasiirka arimaha dibeda ee Canada ayaa ah mudane lagasoo doorto galbeedka magaalada Ottawa oo ah deegaan ay Soomaalidu ku badan tahay. Xigasho: Hiiraan Online,Ottawa, Canada